Isuzu Factory, shirkado - Shiinaha Soosaarayaasha Isuzu
Gawaarida gawaarida adag ee waara ee Isuzu4JJ1
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Isuzu4JJ1
Mashiinka qallafsan ee crankshaft, fiilooyinka CNC, mashiinnada axdi qarameedka CNC, fiilooyinka CNC, iyo qalab kale oo horumarsan ayaa si ballaaran loogu isticmaali doonaa beddelka CNC, axdi qarameedka gudaha, iyo leexashada-xoqidda ee joornaalka ugu weyn iyo isku xirka joornaalka ulaha si wax ku ool ah loogu yareeyo cilladaha crankshaft makiinado. Dhammaystirka crankshaft, mashiinnada crankshaft ee ay maamusho CNC ayaa si ballaaran loogu isticmaali doonaa dhammaystirka joornaalada. Mashiinka shiidan ee noocan ah waxaa lagu qalabeyn doonaa shuruudo otomaatik ah oo loogu talagalay mashiinka dheellitirka qalabka dheelitirka firfircoon, xarunta dhexe ee qalabka raadraaca tooska ah, cabbiraadda otomaatiga ah, qalabka magdhawga otomaatiga ah, dhajinta gawaarida gawaarida otomaatiga ah, xawaaraha toosan ee joogtada ah iyo shuruudaha kale ee shaqeynaya si loo hubiyo xasilloonida mashiinka. tayada. Xaaladda hadda jirta ee ku-tiirsanaanta qalabka-sare ee qalabka la soo dejiyo lama filayo inuu isbeddelo muddada-gaaban.
Shirkaddu waxay leedahay qalab farsamo oo tayo sare leh, hababka tijaabada sayniska iyo shaqaale tayo sare leh. Wax soo saarka ugu muhiimsan: qaybo sax ah oo saxan oo saxan oo sareeya; qaybaha gawaarida; qaybo farsamo iyo qaybo farsamo oo otomaatig ah. Mashiinnada ugu muhiimsan: CNC lathe xakamaynta lambarrada, lathe kantaroolka lambarrada tirada badan, xarunta mashiinnada CNC, shiidiinta gudaha iyo dibedda, shiidiida crankshaft, shiidi la'aanta xarunta, qoob-ka-ciyaarka, muraayadda wax lagu shiido ... iwm. Waa lamaanahaaga aad ku kalsoon tahay!
Gawaarida gawaarida adag ee loogu talagalay Isuzu4BD1
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Isuzu4BD1
Daminta dhexdhexaadinta soo noqnoqodka dhexdhexaadka ah ee crankshaft waxay qaadan doontaa qalab kuleyliyaha dhexdhexaadka ah ee kumbuyuutarka lagu xakameeyo, kaas oo leh astaamaha hufnaanta sare, tayada deggan, iyo hawlgalka la xakamayn karo.
Shirkaddayadu waa soo saare ku takhasusay soo-saarka, iibinta iyo naqshadeynta qalabka saxda ah. Badeecaduhu inta badan waxay u adeegaan wax soo saarka caaryada, soo saarida gawaarida, soo saarista mashiinada, otomaatiga iyo warshadaha kale, waxaana ka go'an inay macaamiisha siiyaan farsamo xirfadeed, adeeg tayo sare leh oo daacad ah. Wax soo saarka shirkaddu waxay leeyihiin sumcad wanaagsan, shabakadda iibkuna si dhakhso leh ayey u gaadhay dalka iyo adduunkaba. Waxay boos ku leedahay qaybaha saxda ah ee caaryada iyo qalabka, waxayna ku guuleysatay macaamiisha.